XOG:- Lix Arimood Oo Ay Qasab Tahay Inuu Jose Mourinho Xal U Helo Ka Dib Ceebtii Ka Soo Gaartay Chelsea. - Hablaha Media Network
XOG:- Lix Arimood Oo Ay Qasab Tahay Inuu Jose Mourinho Xal U Helo Ka Dib Ceebtii Ka Soo Gaartay Chelsea.
HMN:- Jose Mourinho ayaa wajahay isbuucyo muhim u ah Manchester United.
United ayaa badisay kaliya hal kulan lixdii kulan ee ugu danbeysay Premier League, waxaana ceeb ay ka soo gaartay Chelsea oo ay axadii marti ugu aheyd Stamford Bridge.
Waxa ay kulanka soo socda la ciyaarayaan habeen danbe kooxda Manchester City wareega 16ka ee EFL Cup iyadoo kooxda Pep Guardiola ay durbaba ku badisay Old Trafford xilli ciyaareedkan.
Guuldarro kale oo soo gaarta waxa ay cadaadiska ku sii kordhineysaa tababaraha reer Portugal ka dib kaliya seddex bilood oo uu kooxda tababare u yahay.
Waxa uu dabcan weli heystaa waqti uu wax ku saxo laakiin waxa uu u baahan yahay inuu si degdeg ah wax u saxo. Jariirada Daily Mirror ayaa qortay lixdaan qodob ee hoose ee ay tahay inuu Mourinho xal u helo.
1. Inuu qaab ciyaareed ugu fiican ka soo saaro Pogba
Mourinho waxa uu isku dayay inuu ciyaarsiiyo dhowr boos oo khadka dhexe oo ay ku jirto booska burburiyaha khadka dhexe ama booska kubadsameeyaha ee weerarka laakiin weli ma uusan helin shax ciyaareed ka saacideysa Pogba oo ah xiddiga dunida uga qaalisan inuu soo bandhigo qaab ciyaareedkiisa ugu fiican.
2. Inuu xal u helo difaaciisa liita
Difaaca liita ee United waxaa banaanka soo dhigtay Chelsea iyadoo Chris malling iyo Daley Blind ay ahaayeen kuwa qaab ciyaareed un soo bandhigay, waxaana taas sii dheer in Eric Bailly oo ahaa daaficii ugu fiicnaa ee ay United heysatay inuu muddo dheer dhaawac ku maqnaanayo.
3. Inuu Rashford ka ciyaarsiiyo booska uu ku fiican yahay
Rashford waxaa laga ciyaarsiinayaa garbaha weerarka si Zlatan Ibrahimovic uu uga ciyaaro booska gooldhaliyaha, laakiin 18 jirkaan ayaa ku fiican booska dhexe ee weerarka waana in halkaas laga ciyaarsiiyo.
4. Inuu xal u helo xaalada Carrick
United waxa ay u muuqataa mid khadkeeda dhexe uu iska dheelitiran yahay marka uu ciyaaro Michael Carrick kaasoo Pogba siinaya xoriyada uu weerar ku aado islamarkaana uu saameyn ku yeesho, sidaasi oo ay tahay fursadihiisa kulamada horyaalka aad ayay u yar yihiin.
5. Inuu qirto qaladkiisa Fellaini
Mourinho waxa uu weli soo xulanayaa Fellaini kulamada waa weyn ee Man United, laakiin wax micno weyn ah kuma soo kordhiyo khadka dhexe oo aan ka aheyn inuu kursiga keydka ku hayo xiddig kaga saameyn badan booska burburiyaha khadka dhexe oo ah Michael Carrick.
6. Inuu fursad siiyo Mkhitaryan
Xilli ciyaareedkii hore waxa uu ahaa xiddigii ugu fiicnaa Bundesliga welina ma uusan ciyaarin tan iyo markii uu 45 daqiiqo dheelay kulankii ay guuldarada ka soo gaartay Manchester City. Waxa uu u baahan yahay in fursad la siiyo oo uu tuso jamaahiirta United sababtii looga soo bixiyay 26 milyan ginni.